Haayada caalamiga ah ee haajiraada IOM oo dalbatay $24.6 milyan si ay u quudiso boqolaal kamid ah dadka ay abaartu saamaysay ee gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHaayada caalamiga ah ee haajiraada IOM oo dalbatay $24.6 milyan si ay u quudiso boqolaal kamid ah dadka ay abaartu saamaysay ee gudaha Soomaaliya
Haayada caalamiga ah ee haajiraada IOM oo dalbatay $24.6 milyan si ay u quudiso boqolaal kamid ah dadka ay abaartu saamaysay ee gudaha Soomaaliya
March 4, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Haayada caalamiga ah ee haajiraada IOM oo dalbatay $24.6 milyan si ay u quudiso boqolaal kamid ah dadka ay abaartu saamaysay ee gudaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Nairobi-(Puntland Mirror) Haayada caalamiga ah ee haajiraada (IOM) ayaa dalbanaysa $24.6 milyan si ay u quudiso samatabixinta boqolaal ka mid ah kumanaanka ugu daran ee dhibanayaasha abaarta Soomaaliya. Intooda badana ay hadda khatar ugu jiraan macaluul.
Warbixinada haayadaha gargaarka ayaa walaac ka muujinaya in Soomaaliya ay ku dhici karto abaartii ku dhufatay sanadkii 2011-kii, taasoo dishay kumanaan dad ah.
IOM ayaa ka digtay abaartan daran ee jirta in ay tiro badan oo dad ah khatar dhigi karto. Afhayeenada IOM Olivia Headon ayaa sheegtay in loo baahanyahay in la kordhiyo gargaarka insaanimo si looga hortago in macaluul ay ka dhacdo meelaha qaar.
“Mushahaaraadkii waa burburay, qiimaha cunada maxaliga ah waa siyaaday, dhimashada xooluhu waa kordhay, heerka nafaqo daro waxa uu bilaabay in uu kor u kaco, qiimaha biyaha siyaaday dadka Soomaalida ee guuraya ayaa kordhay si ay u raadsadaan cuno iyo biyo. Caawimaad la’aan, dad badan ayaa wajahaya nafaqo daro, waxayna khatar ugu jiraan dhimasho.” Ayay tiri Olivia Headon.
Dalabka IOM ayaa bartilmaameedsanaya in ka badan hal milyan oo kamid ah 6.2 milyan oo dad ah oo ay saamaysay abaarta Soomaaliya oo u baahan caawimaad ilaa iyo bisha June, sida ay sheegtay afhayeenka IOM.
Headon, ayaa intaas ku dartay in ay muhiimada siin doonaan baahiyaha cunada, biyaha, nadaafada, caafimaadka iyo nafaqada, iyo hoyga.
March 5, 2017 Hal qof oo haraad dartiis ugu geeriyooday gudaha gobolka Nugaal
Ciidamada Suuriya oo ISIS kala wareegay magaalada taariikhiga ah ee Palmyra
At least three wounded after gunmen threw grenade at district court in Bosaso port town
Jawaari oo beeniyay in uu iscasilayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari ayaa beeniyay in uu iscasilayo, sida lagu sheegay bayaan xafiiskiisa kasoo baxay Sabtidii. “Waxaan ka war helnay in warar been ah lala wareegayo Baraha Bulshada kuwaasoo [...]
Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah meelmariyay xeerka howlgabka kasoo xuquuq siinaya shaqaalaha rayidka markii ay noqdaan howlgab. 38 xubnood oo fadhiga joogtay ayaa 34 xildhibaan aqbashay xeerka, 4 ayaa ka aamusay, [...]
Madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo Jubbaland oo wadahadal la yeeshay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ayaa wadahadal la yeeshay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto. Kulanka oo ka dhacay magaalada Nairobi maanta oo Jimce ah, ayaa diirada lagu saaray arrimaha ammaanka, federaalka, [...]